Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनलाई गलत तरिकाले डिल गरे : लोसपा नेता मिश्र
रविदत्त मिश्र, नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल
० मधेश विद्रोहको १५ वर्ष पूरा भयो । यो १५ वर्षे यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
— हामीले मधेश विद्रोह वा आन्दोलनको अवसरमा हरेक वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छौं र यस वर्ष पनि मनाएका छौं । मधेशी सपुतहरुले स्वायत्त मधेश प्रदेश, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका लागि सहादत दिएको दिनको रुपमा हामी स्मरण गर्दैआएका छौं । ती मधेशी महान शहीदहरुको सहादतबाट नै अहिले हामी संघीयता पाएका छौं, प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश भएको छ । यतिमा हाम्रो आन्दोलन सीमित हुनु हुँदैन । अहिले सीमांकनका कारण मधेशका जिल्लाहरुलाई टुक्रा–टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । हाम्रा मुद्दाहरु अहिले टुंगिएको छैन । हामी आन्दोलनमै छौं । यो संविधान अपुरो र अधुरो छ भनेर हामी प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौं । यो संविधानलाई हामीले पूर्णरुपले अस्वीकार पनि गरेका छैनौं र स्वीकार पनि गरेका छैनौं । सबैको अधिकार संविधानमा अनुभूति हुने गरी संविधानमा संशोधन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । हामी शहीदको सपना पूरा गराएरै छाड्छौं ।
० मधेशकेन्द्रित दलहरु मिलेर एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दल जसपा बनेको थियो तर अहिले विभाजन भएको अवस्थामा छ । यसले शहीदको सपना कसरी पूरा हुनसक्छ ?
— यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । कुनै पनि आन्दोलनबाट एउटा शक्तिको निर्माण हुन्छ र त्यो शक्ति जब छिन्नभिन्न हुन्छ त्यसले एजेण्डालाई कमजोर बनाउँछ । जब गलत व्यक्ति नेतृत्वको ठाउँमा पुग्छ, त्यसले आन्दोलनलाई कमजोर नै बनाउँछ । हामीले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि उपयुक्त समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म शासक दलहरु मजबुत हुन्छ, उसको सत्ता संकट हुँदैन तबसम्म तिनीहरुले मुद्दा सम्बोधन गर्न चाहदैन । जब कमजोर हुन्छ, उसको सत्ता संकटमा पर्छ अनि सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ । त्यो मौकाको फाइदा उठाउने नेतृत्व हामीसँग छ । तर उपेन्द्र यादवको दम्भ र अहंकारका कारण त्यो असफल भयो । जतिबेलासम्म केपीको सरकार मजबुत अवस्थामा थियो त्यतिबेलासम्म मधेशको मुद्दा सुन्न चाहेन तर जब संकट प¥यो नि धमाधम मधेशका मागहरु पूरा गर्न थाल्नुभयो । त्यो बेला यदि उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु इमान्दार भइदिएको भए हाम्रा धेरै मागहरु सम्बोधन भइसक्थ्यो । उपेन्द्र यादवको धोकाधडीका कारण आज मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरु पूरा हुन सकेन । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी जतिबेला छोटो अवधि (१८ दिन) का लागि भएपनि सरकारमा बस्दा महत्वपूर्ण कामहरु भएको थियो । मधेश आन्दोलनका बेला लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खारेज भयो, नागरिकता अध्यादेश जारी भएको थियो, रेशम चौधरीको मुद्दाबारे छलफल सुरु भएको थियो, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको थियो । तर अहिले हेर्नुस्, उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पहिला पनि डेढ वर्ष सरकारमा रह्यो र अहिले पनि छ । तर मधेशका के–के मागहरु पूरा गरायो ? जनताले सोधिरहेका छन् । उपेन्द्र यादवले पहिलादेखि मधेश र मधेशीसँग धोकाको राजनीति गर्दै आउनुभएको छ । आउने दिनमा जनताले समीक्षा गर्नेछ ।
० मधेश आन्दोलनका बेला मधेशका भित्ता–भित्तामा मधेश सरकार लेखिएको थियो । तर अहिले मधेशका आठ वटा जिल्लालाई मधेश प्रदेश घोषणा गरिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
— यो दुःखद पक्ष हो तर सकारात्मकरुपले हेरियो भने आंशिक उपलब्धि पनि हो । किनभने यो राज्यसत्ताले मधेश शब्द सुन्न चाहिरेको थिएन । त्यसैले आठ वटा जिल्लाको मधेश भएपनि त्यो एउटा उपलब्धि नै हो, यसले मधेश आन्दोलनका शहीदप्रति सम्मान नै भएको हो । यो आठ जिल्लाको मधेशलाई विस्तार गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य अभिभारा रहेको छ । आउने दिनमा मधेशका जिल्लाहरु जुन अन्य प्रदेशहरुमा राखिएको छ, ती सबैलाई समेट्ने गरी प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा हो । मधेश आन्दोलनका बेला हामीले उठाएको स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग बिर्सेका छैनौं । एक न एक दिन हाम्रो जीत अवश्य हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
० भनेपछि तपाइँहरु आठ जिल्लाकै भएपनि मधेश प्रदेश स्वीकार गर्नुभएको हो ?
— प्रदेश २ (मधेश प्रदेश)का साथीहरुलाई लागेको होला कि हामी सबै कुरा पाइसक्यौं । व्यक्तिगतरुपमा केही नेताहरुलाई फाइदा भएको होला । आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश नामाकरणले सम्पूर्ण मधेशी खुशी भएका छैनन् । हाम्रा शीर्ष नेताहरुले भन्नुभएको छ कि हामी आंशिकरुपमा उपलब्धि पाएका छौं । हाम्रा मुद्दाहरु यथावत् छ । बाँकी मुद्दा पूरा गराउनका लागि हामी संघर्षमै रहन्छौं । मधेशका अन्य जिल्लाहरुलाई यस समेट्नका लागि हाम्रो आगामी दिनमा संघर्ष रहन्छ ।
० बाँकी जिल्लालाई समेट्न अब सम्भव देख्नुहुन्छ ?
— बिल्कुल सम्भव छ । जनताले चाह्यो भने केही पनि असम्भव हुँदैन । यो देशमा वर्षौंसम्म राणा, राजाहरुले शासन गरे तर जब जनता आफ्नो अधिकारका लागि जागे ती सबैलाई फालिदिए । अहिले ठूला भनाउँदा दलहरुले स्वायत्त मधेश प्रदेश भनेर लिखित सम्झौता गरेका छन् । पटक–पटक सरकारकै स्तरमा र ती दलहरुले पनि लिखितरुपमा स्वीकार गरेका छन् । सुरुमा हामीले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म समग्र मधेश प्रदेश भनेका थियौं । तर पछि समग्र मधेशमा दुई प्रदेशको अवधारणा ल्यायौं । झापादेखि नारायणी नदीसम्म एउटा प्रदेश र यता नारायणी नदीको कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश बनाउने सरकारीस्तरबाट स्वीकारिसकेको अवस्था छ । तर प्रदेशहरुको सीमांकन गर्ने बेलामा राज्यले हामीसँग बेइमानी ग¥यो । मधेशका २२ जिल्लालाई ६ टुक्रामा विभाजित गरिदियो । राज्यको त्यहीं बेइमानीको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन छ । बन्दुकको बलमा संविधान जारी गरियो, त्यसैले हामी संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौं ।
० जनतामा तपाइँहरु विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ नि ?
— केही लोभीपापी र गद्दार नेताहरुका कारण जनतामा अविश्वासको वातावरण अवश्य देखिएको हो । तर जनताले त्यस्ताहरुलाई चिनिसकेका छन् । कुनै नेता बेइमान भए भनेर सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन । हामी जहिले पनि मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारमा गएका थियौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा केपी ओलीको सरकारमा १८ दिन मात्र बस्दा उल्लेखनीय कामहरु भएको थियो । हाम्रा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको थियो तर उहाँले मुद्दालाई रोज्नुभयो । शासकसँग लड्नका लागि हाम्रा नेता राजेन्द्र महतोले मधेशी एकतामा जोड दिनुभयो । तर हाम्रा केही नेताहरु भ्रममा परेर मधेशलाई कमजोर बनाउनुभयो । त्यसैले जनताले बुझिसकेका छन् कि अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र शोषित पीडितको माग पूरा गराउन सक्छ । आगामी चुनावमा जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएका छौं । मधेशी एकताको पक्षमा को छ, मधेशको मुद्दाको पक्षमा छ भन्ने कुरा समीक्षाको विषय हो ।
० आगामी चुनावमा कसरी प्रस्तुत हुने ?
— हाम्रा मुद्दाहरु त यथावतै छ । जनसंख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, सीमांकन, नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका एजेन्डाहरु पूरा गराउन हामी जहिले पनि संघर्षरत् नै छौं । जनताले यहीं आधारमा हामीलाई विश्वास गर्नेछ । किनभने हामी मुद्दालाई सत्तासँग कहिल्यै पनि सम्झौता गरेका छैनौं । यसका ज्वलन्त उदाहरण जगजाहेर छ । छोटो अवधिका लागि सरकारमा जाँदा कति उपलब्धि हासिल भयो, त्यो कुरा जनताले पनि बुझिरहेका छन् ।